Madaxweyne Xasan Sheekh oo Iska Bareejeeyay Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif (Muxuu sameeyay) | Somali - Diaspora
Madaxweyne Xasan Sheekh oo Iska Bareejeeyay Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif (Muxuu sameeyay)
Monday October 2012 – Xasan Sheekh Maxamuud ayaa noqday Madaxweynaha Laba Xaasle ah, oo xarunta Madaxtooyada dalka looga taliyo ku wada noolaadaan si wada jir ah.
Warar lagu kalsoon yahay ayaa sheegaya in Xaaska koowaad (First Lady) ee Madaxweyne Xasan Sheekh oo in mudo ah ku nooleed magaalada Nairobi ay hada si rasmi ah u soo degtay xarunta Villa Somalia, sidoo kale marwada Labaad ee Madaxweynaha ayaa degan isla Villa Somalia.
Sida uu Warfaafiyaha Moment Media Group u xaqiijiyay mid ka mid ah shaqaalaha xarunta Madaxtooyadda in Madaxweyne Xasan Sheekh si la mid ah Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sh. Axmed in marwooyinkiisa ay ku wada nool yihiin qeybta degaanka ee Madaxweynaha.
Madaxweynihii hore Sheekh Shariif Sh. Axmed ayaa markii ugu horeysay ee la arko Labadiisa Xaas waxay aheyd bilowgii Ololihii doorashooyinka laga waday magaalada Muqdisho, waxayna door muuqda ay ku lahaayeen ololihii doorashooyinka, iyagoo taageero ka raadinayay haweenka Soomaaliyeed iyo ururada bulshada.
Waxaa lagu xasuustaa Marwooyinka Madaxweyne Shariif in markii xafladaha qaar Labadiisa Marwo ay istaagi jireen labada garab, sidaasi si la mid ah Madaxweyne Xasan Sheekh ma sameyn doonaa, ayey dad badan isweydiinayaan.
Xafladii ugu danbeysay ee Sheekh Shariif iyo Marwooyinkiisa ay ka qeybgaleen oo aheyd xafladii ugu ballaarneed ee ololihii doorashadiisa loo qabto ayaa xili uu khudbeynayay waxaa jooga ka dhacday mid ka mid ah xaasaskiisa xili ay socotoy khudbadii uu jeedinayay Shariifka, balse lagu soo kala cararay markii ay dhulka ku dhacday, mana uusan joojin Sheekh Shariif khudbadiisa oo halkeedii ayuu ka sii waday.
Words, once they are printed, have a life of their own.Prof.Ibrahim
Xasuuqa dhacaya: Shalay iyo Maanta! Who are the U.S. supporting in Somalia?